Ogaden News Agency (ONA) – Sanad guuradii 30aad ee JWXO oo Ifo si Weyn looga xusay – Dhagayso khudbadihii qaarkood
Sanad guuradii 30aad ee JWXO oo Ifo si Weyn looga xusay – Dhagayso khudbadihii qaarkood
Posted by ONA Admin	/ August 20, 2014
Maalin nimadii talaadada oo ay taariikhdu kubeegnayd 19/8/14 waxaa xerada qoxootiga Ifo ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay xafla aad ubalaadhan oo lagu xusayay sanad guuradii sadonaad ee kasoo wareegtay aas’aaskii JWXO. Xafladan oo ahayd mid siway loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay dadwayne aad utiro badan oo isugu jiray xubnaha jabhada ee kudhaqan xerada Ifo, xubo kakala socday Dhadhaab, Dhagaxlay, Xagardheere iyomarti sharaf kale oo lagu casuumay xaflada sida maamulka qoxootiga ee xerada Ifo, odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo dad magic kuleh deegaanka dhadhaab.
Ugu horayna xaflada ayaa lafuray abaare 10:00 subaxnimo xiliga Dhadhaab waxaana si wanaagsan udaadihinayay gudoomiyaha gudiga qabanqabada halgame cabdi carab oo si aad uquruxbadan u’agaasimayay islamarkaana si diiran usoo dhawaynayay martidii ka imanaysay deegaanada kale iyo xubnihii Ifo ba. Wuxuuna kusoo dhaweeyay sh Xassan raage si uu dadwaynaha ugu baraarujiyo cabsida Allaah faral kifaayahana inooga rido sheekha ayaa wacdi aad uqiima badan goobta kasoo jeediyay isagoo adeegsanayay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo axaadiis kasugnaatay rasuulka S.C.W ayuu kudheeraaday kuwa uxarooda gaalada ama karidooba diinta islaamka wuxuuna sheekhu sheegay in ayna ahayn mid cusub in ay dad muslimiinta lasocday ay gaalada isu dhiibaan isagoo xusay in ay arintaasu jirtay inta uu islaamku jiray.
1. sh xassan rage
Intaas kadib waxaa laguda galay ajandayaashii xaflada waxaana goobta laga akhriyay taariikh aad udheer oo ay akhrinayeen 3 halgame waxaana qaybta koobaad akriyay halgame bashiir sheikh oo soo dulmaray halgankii iimaam axmad ibraahim axmad guray ee badhtamihii qarnigii 16aad ilaa halgankii daraawiishta ee uu hogaaminayay Allaha unaxariistee halgamaagii waynaa ee sayid maxamad cabdulle xassan.
Waxaa halkaas kasii abaqaaday halgame sh maxamad aadam oo dulmaray halgankii SYL ee lagu xoraynayay guud ahaan dhuka soomaaliyeed kii uu hogaaminayay garaad makhtal garaad daahir kii WSLF ee uu hogaaminayay maxamad diiriye uurdoox wuxuuna waxaa sidoo kale qaybta 3aad akhriyay N/hure faysal cabdulahi oo akriyay bilawgii JWXO ee uu hogaaminayay sheikh ibraahin cabdala ilaa manta oo uu hogaaminayo Adm maxamad cumar cismaan waxaa xusid mudan in laxusay oo aan laga tagin dhamaan halgamayaashii ragas howsha lawaday kuwa shihiiday iyo kuwa noolba.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay qaybaha kaladuwan ee martida sida Dhagaxlay, Dhaadhaab, xagardheere iyo marti sharaftii kale waxayna dhamaantoo madasha kasoo jeediyeen khudbado dhaxal gal ah. Sidoo kale waxaa gabay qiiro badan soo jeediyay halgame mukhtaar sulub oo runtii intuu hadalka haystay uu waxbadan dadkii iska badalay.
2. mukhtar sulub cagjar
Intaas kadib waxaa loo kala dhaxbaxay dadwaynihii iyo labada kooxood eek ala ah Hilaac oo dhagaxlay kasocotay iyo Kacaan oo xagardheere kasocotay oo labaduba marti u ahaa faraca muftaaxulxoriyo ee xerada ifo.
Waxaana lagu soodhaweeyay kooxda Hilaac oo wacdaro ka dhigtay madashii ay xafladu kasocotay sidoo kalana waxaa lagu soodhaweeyay kooxda Kacaan oo iyana soo bandhigtay suugaan aad looga maqsuuday labadan kooxood ayaa dadkii kumaaweeliyay kuna shiiri galiyay in ay garab istaagaan ciidanka xooga dalka ogadenia iyagoo adeegsanayay rasaasta afka laga rido ee suugaanta.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa sinabad galiya ah kusoo dhamaatay xafladii iyagoo ay asxaabtu sifiican ukala warqaadanayeen kadib markayxafladu dhamaatay.